Efa ampolony ireo tafaroboka: tratra ilay mpisoloky amin’ny alalan’ny Sms | NewsMada
Maro ireo efa voany! Efa ampolony no nijabaka ka tafiditra tanaty vela-pandrik’ireo mpisoloky amin’ny alalan’ny Sms. Mandoa vola mba hahazoana ilay volabe, na ny loka avy amina orinasa manome fiara, sns. Voasambotra ary migadra any Toamasina i André Saidou. Mbola karohina kosa ireo namany.
Nahazo loka fiara 4×4 avy amin’ny orinasa iray, nisy nandefa vola amin’ny alalan’ny “mobile money” ka mila mifanaraka amin-dry zareo hamoahana izany, sns. Karazana hafatra amin’ny finday (Sms), izay miparitaka be efa aan-taonany maro izany. Mazava loatra fa fisolokiana bevava no ao ambadika, kanefa dia mbola aman-jatony ihany ireo tafaroboka amin’izany. Antony iray tsy mampitsahatra ity asa ratsin’ireo jiolahy ity mihitsy ny fisian’ireo voajono amin’izany.
Noho ny fitoriana napetraky ny sasantsasany tamin’ireo voasoloky no nahasamboran’ny polisy misahana ny ady heloka bevava ao Toamasina an’i André Saidou. Ampolony maro no efa voasolokony ka nametraka fitoriana mitovy ny telo tamin’ireo. Nahasahy nijoro vavolombelona hatramin’ny farany, hatreny amin’ny fitsarana ireo olona lasibatra ka nahafahana nampiditra am-ponja vonjimaika an’ilay voarohirohy. Ny fanadihadiana no nahafantarana fa mbola misy namany telo karohina, satria tambajotra mihitsy izy ireo no manao izany asa fisolokiana izany. Mbola misy fitoriana roa hafa ihany koa, mipetraka any amin’ny zandary.
Nandraviravy vola ny polisy
Araka ny nambaran’ireo polisy nanao fanadihadiana, mbola tsy menatra ny nandraviravy vola hanaovana kolikoly ity voasambotra ity. Nivadika ho fandrahonana izany rehefa tsy nety nandray ny polisy, satria tsy hahatazona ary tsy hahavita hampiditra am-ponja azy, hono, raha ny fampitam-baovao hatrany. Nijoro ka nanohy ny asany hatramin’ny farany kosa ireo polisy nanao ny fanadihadiana, ka tonga tamin’ny fampidirana am-ponja ihany.
Tsy any Toamasina ihany fa miseho manerana ny Nosy mihitsy ity fisokoliana amin’ny Sms sy amin’ny alalan’ny “Facebook” ity. Maro rahateo ireo te hanambola vetivety ka mora roboka tsy manadihady lalina. Asain’ireo mpisoloky mandefa vola, ohatra, ireo nahazo loka fiara, mba hikarakarana taratasy sy handefasana izany miakatra. Matetika mantsy lazaina fa any Namakia, sns, no misy ilay orinasa. Toraka izany koa ireo tratra amin’ny hoe nahazo M’Vola, sns, ka handefasany Sms amin’ny laharana finday. Lazainy fa diso lalana iny, saingy azo alaina raha mifanaraka fa mila mandefa vola aminy aloha. Tantara mitohy….